Izikhulu zikahulumeni zizovakashela eLadysmith | News24
Izikhulu zikahulumeni zizovakashela eLadysmith
Ladysmith - Izikhulu zikahulumeni ngoLwesine kulindeleke ukuba zivakashele endaweni okwenzeke kuyo isigameko sokubulawa kwesikhulu samatekisi nabanye abantu abadutshulwe babulawa ngoLwesibili.
Kushone abantu abangu-11 esigamekweni okukholakala ukuthi sihlobene nodlame lwamatekisi oluqhubeka phakathi kwezinhlangano zamatekisi amabili, iSizwe neKlipriver, kubangwa umzila osuka eMnambithi ubheke eGoli.
OLUNYE UDABA:Sesinyukile isibalo sabashone kwesenzeke eLadysmith
Oshayasibhamu abangaziwa bavulela ngenganono bebhekise evenini babulala isekela likasihlalo weKlipriver Taxi Association kanye nabantu abane abebehamba nalo sihlalo.
Ngesikhathi kwenzeka lokhu, izisulu bezhamba ngeveni eliphaphalazile layoshayisa itekisi okushone kuyo abantu abangu-6.
ISouth African National Taxi Council (Santaco) ikuphikisile ukuthi isigameko sangoLwesibili sokubulawa kwesikhulu samatekisi nelungu lomndeni waso eMnambithi, KwaZulu-Natal kuhlobene nombango wemizila.
UNobhala Jikelele weSantaco uJabulani Manqele uthe njengoba kunezinxushunxushu eziqhubekayo phakathi kwalezi zinhlangano zombili, isigameko sokubulala asihlobene nokuqhubeka phakathi kwazo.